Forum serasera malagasy Manan-kasina ny MPANABE Malagasy, omeo azy ny zo feno !!! - Dinika forum.serasera.org
Manan-kasina ny MPANABE Malagasy, omeo azy ny zo feno !!!
Fitohizan'ny hafatra : Manan-kasina ny MPANABE Malagasy, omeo azy ny zo feno !!!
rebiryx - 22/03/2012 05:55
Salama daholo ry Namana ! Ataoko fa isika rehetra izao dia samy nandray ny Fanabeazana avy tamin'ireo Mpanabe antsika tsirairay avy vao tonga amin'izao toerana misy antsika izao aby. Hatramin'izao aza dia mbola mipetraka tsara ao amin'ny fitadidiantsika ny fihetsika, ny fiteny, ny toetra ary ny endrik'izy ireo tamin'izany fotoana izany.
Fitarihana ny saintsika fotsiny ireo fa ny tena tiana ambara etoana dia ny momba ny fahoriana manjo ireo MPANABE, nahitantsika fiainana ireo. Mijaly loatra izy ireo raha ity resaka tambikarama sy fanampiana ara-tsosialy ity no jerena. Raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao manko dia ny Mpanabe (Mpampianatra) no tena voa mafy ary fadiranovana eo amin'ny fiaraha-monina Malagasy ka mila tohanana mafy. Mandany hery fotoana maro izy amin'ny fanomanana ny fampianarana, mievoka ny vovoka lakiré sy ny herilohan'ny zaza mba hahaolombanona ny zaza Malagasy manontolo.
Omeo azy ireo ny zony satria matoa mitokona izy ireo amin'izao fotoana izao dia efa feno loatra ny kapoakan'ny fijaliany, ny tsy eran'ny aina.
Nahoana tokoa moa rehefa ny miaramila no mitokona dia milamina vetivety sady voavaha avy hatrany ny olana eo aminy fa rehefa ny Mpampianatra no mba mitaky ny zony dia tsy misy valiny hatramin'ny farany ?
Raha tena mahatsapa fa nahazo fanabeazana marina isika mianakavy dia tohano ny fitakiana ataon'ny MPANABE (Mpampianatra) ary aoka ianareo hiray hina hatramin'ny farany rehefa mitaky dia ho soa ny valiny !!!